"xagjiriin ku sugan Suuriya oo ka macaashay gargaarka UK" - BBC News Somali
"xagjiriin ku sugan Suuriya oo ka macaashay gargaarka UK"
Dowladda Britain ayaa joojisay mashruuc gargaar caalami ah ka dib markii barnaamijka BBC Panorama baaritaan uu sameeyay lagu ogaaday in lacagta canshuur bixiyayaasha UK loo weeciyay dhanka xagjiriinta Suuriya.
Sidoo kale waxaa la ogaaday in ciidamo boolis oo UK ay taageerto oo ku sigan Suuriya ay la shaqeeyeen maxkamado fuliyay xukunno xad gudub ah.
Afhayeen u hadlay dowladda UK ayaa sheegay in eedaha ah la shaqeynta argagixisada ay u qaadaneyso "si dhab ah".
Shirkadda mashruuca gargaarka fulisay oo lagu magacaabo Adam Smith International, ayaa sheegtay in si adag ay u beenineyso eedahaasi.
Booliska xorta ah ee Suuriya waxaa la dhisay ka dib kacdoonkii Suuriya si kala dambeyn loogu soo celiyo deegaanada ay ka taliyaan xoogagga mucaaradka.
Shirkadda Caalamiga ah ee Adam Smith (ASI) waxay mashruuca fulineysay tan iyo bishii Oktobar, 2014-kii.
Britain waxay ka mid tahay lixda dal ee bixiya dhaqaalaha mashruucan oo ah mid ku saabsan arrimaha amniga bulshada ku nool meelaha mucaaradka ay joogaan ee gobollada Xalab, Idlib iyo Daraca.
Kooxaha jihaaddoonka Suuriya oo is laayay
Xabaal-wadareedyo laga helay Suuriya
Waxaa loogu talagalay in uu ahaado boolis rayid ah oo aan hubeysneyn, iyo in aan lala shaqeyn kooxaha xagjiriinta, balse barnaamijka Panorama wuxuu helay tusaalooyiin muujinaya in shaqada mashruuca uusan sidaa ahayn.
Qaar ka mid ah eedaha lagu muujiyay Panorama waxaa ka mid ah:
Booliska in uu la shaqeeyo maxkamado fuliya dilal - sida kiiska laba dumar ah oo dhagax lagu dilay
Ciidamada waxaa la siiyaa lacag taas oo ka dib lagu cadaadiyo in ay u sii gudbiyaan "xagjiriinta" maamula meelaha ay joogaan
Askarta booliska waxay gacanta u galaan koox xagjir ah
Dad dhintay iyo kuwa aanba jirin ayaa magacyadooda lagu qaataa mushaarka booliska
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Britain, Boris Johnson ayaa bishii April ku dhawaaqay in £4 milyan oo gini oo dheeraad ah la siinayo mashaariicda UK ay maalgeliso ee cadaaladda iyo amniga bulshada la xiriira, kaas oo ay fuliso laanta booliska xorta ah ee Suuriya.
Hay'adda ASI waxay sheegeysaa in FSP ay yihiin boolis aan hubeysnayn oo ka shaqeeya sharciga iyo kala dambeynta iyo amniga malaayiin qof oo ku dool dalka uu dagaalka ragaadiyay.
Afhayeen u hadlay ASI wuxuu sheegay "in si adag ay u beeninayaan eedaha Panorama".
"Si fiican ayaan u maamulnay lacagta laga qaaday canshuur bixiyayaasha si loola dagaallamo argagixisada, in amni ay helaan dadka Suuriya iyo in la yareeyo halista ka dhalan karto ka shaqeynta dal uu dagaal ka socdo," ayuu sheegay afhayeenka u hadlay ASI.
"ASI si guul ah ayey uga shaqeysay fulinta mashruuca ayadoo garab ka heleysa saaxiibadeeda, xilli ay jiraan caqabado adag, halis aad u sareysa. Waxaana korka kala socda xafiisyada arrimaha dibadda iyo barwaaqa sooranka iyo shan dowladood oo kale."
Shirkadda ayaa ku doodeysa in booliska ay siiyay lacag caddaan ah maadaama aysan jirin wax kale oo la sameeyo, dowladda Britain na ay ka warhayso bixinta lacagtaasi.
Baarayaasha Panorama waxay gacanta ku dhigeen warqadaha ASI ee muujinaya in magacyada dad dhintay iyo kuwa aan jirin ay ku jiraan diiwaanka bixinta mushaarka.
Saldhig boolis oo ku yaalla magaalada Koknaya ee gobolka Idlib waxaa loogu talagalay in 57 askeri ay ku sugnaadaan. Balse warqadaha waxay muujinayaan in ASI markii ay booqatay halkaasi, bishii Sebtembar ee 2016-kii, in aysan qofna ku arag saldhigga.
Shirkadda waxay sheegtay in askarta lagu arkay booqashooyiin hore. Hadda waxay joojiyeen dhammaad dhaqaalihii lagu bixinayay saldhiggaasi Koknaya.
Sidoo kale waxay sheegeen in ay ogaadeen in magacyada askar dhimatay weli lagu qaadanayay mushaar.
Sidoo kale dukumiintiyada ASI waxay muujinayaan in boolis ku sugan Xalab ay ku qasbanaadeen in lacagta ay siiyaan koox xogjir ah oo lagu magacaanbo Nuur al-Din al-Zinki oo maamusha nawaaxigaas.
Warbixin ay soo saartay shirkadda caalamiga ah ee ASI, bishii July ee 2016-kii, waxaa lagu sheegay in laga baqayo in boqolkiiba 20 mushaarka booliska uu gacanta u galo kooxda xagjirka ah ee Zinki oo ilaaliya shan saldhig boolis oo ku yaalla meesha ay ka arrimiso.
lacag wareejinta ka soke, booliska waxay kooxda Zinki kala shaqeeyaan arrimo sida "bixinta amarada xarigga, gaarsiinta farriimaha iyo in dembiilayaal la hor geeyo maxkamadaha kooxda."
Mucaaradka Suuriya oo "gubay" Basaska shacabka lagu qaadayay